ကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အလုပ်ပြုတ်ပြီး လမ်းတကာ လိုက်တောင်းနေရတဲ့ အဘွားတဦးအကြောင်း - Zet Star
ကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အလုပ်ပြုတ်ပြီး လမ်းတကာ လိုက်တောင်းနေရတဲ့ အဘွားတဦးအကြောင်း
September 14, 2020 ZCC News	0 Comments
ကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အလုပ်ပြုတ်ပြီး လမ်းတကာ လိုက်တောင်းနေရတဲ့ အဘွားတဦးအကြောင်း (ဘုရားပန်းဖိုးနဲ့ ထမင်းဖိုးလေး တနေ့စာရရင် တော်ပါပြီတဲ့)
ကပ်ဆိုးကြီးရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အဘွားတယောက် မျက်ရည်ဝဲပြီး ညီမတို့ကို ပြောပြလာတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ အဘွားဆိုင်ရှေ့ ချီတုံချတုံနဲ့ ရောက်လာပြီး သမီးရေ အဘွားဗိုက်ဆာလို့ အကြွေ ၂၀၀ လောက်တဲ့၊ ပုံစံကြည့်ပြီး သနားသွားတယ်။ အသက် ၇၀ လောက်ရှိမယ်။ အဲဒါနဲ့ လာ…အဘွား ကြာဇံကြော်် စားသွားပါဆိုပြီး အဝ ကျွေးလိုက်တယ်။
အဘွားခမျာ စားနေရင်း မျက်ရည်ဝဲတာ မြင်ရတာ စိတ်တောင် မကောင်းဘူး။ စားပြီးတော့ သူ့အကြောင်းလေး ပြောပြတယ်။
သမီးရယ် အဘွားတခါမှ မတောင်းခဲ့ဖူးဘူး အရမ်းရှက်မိတယ်.. ကိုယ်မတောင်းလဲ လာကျွေးမဲ့သူ မရှိဘူးတဲ့ ဒီကပ်ဆိုးကြောင့် အဘွားအလုပ်ရှင်က အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ်. ရွှေပြည်သာကနေ YBSနဲ့ လာတော့ပိုးကူးမှာစိုးလို့တဲ့ အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ် သမီးရယ်။
ပြောနေရင်း သူမငိုမိအောင် ထိန်းထားတဲ့ မျက်နာလေးခုထိမြင်ယောင်တယ်.. သူတောင်းလို့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့ ဘုရားပန်းကပ်တယ် လှူတယ် ကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ ဆုတောင်းတယ်. တစ်နေ့စာလောက်ငအောင်စားရတယ် မတောင်းပဲနေရင်အဘွားငတ်တော့မှာ..ဆိုပြီးး စကားရပ်သွားတယ်။
ညီမတို့လည်း တတ်နိင်သလောက် ငွေလေးနဲ့ ဗိုက်ပြည့်အောင် အ၀ကျွေးတဲ့အတွက်သူ ဆုတွေပေးနေတာအကြာကြီးပဲ။ တကယ်လည်း မျက်ရည်မဆည်နိင်ဘူးး..နောက်တော့ သူထပြီး သမီးလေးရယ် အဘွားသွားပြီနော် ဆိုပြီး ဆုတွေထပ်ပေးနေတာ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ်။
သူ့ပုံလေးမြင်မိကြရင် အတော်သနားမိမှာ..ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုရိုက်ရင်သူ ပိုရှက်သွားမယ်။ ပုံပြပြီး ကိုယ်လှူခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပြရင်ဘယ်လောက်တောင် လူသားချင်းမစာနာရာဖြစ်မလဲနော် သူအဝေးရောက်မှ ကိုယ်မသိမသာလေးပဲရိုက်ခဲ့တယ်..
ဒီကာလမှာ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ အလုပ်ရှင်တို့ရယ်..ဒီလိုသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ကိုယ်ချင်းစာပေးပါ..သူတို့မှာ ကျောထောက်နောက်ခံလူမရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ပေးမှ သူတို့စားရတဲ့ဘ၀လေး ခုတော့သူ မရှက်မကြောက် တနေ့စာ ရဖို့အတွက်တောင်းးခဲ့ရပြီ……
Zue Zue Thet Oo‎
← တရက်မှာ လူနာ ၂၀၀ ပဲ တိုးလာရင်တောင် နောက် (၁၀) ရက်မှာ ဖြစ်လာမယ့် လူနာအရေအတွက်
ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှ ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်အပျက် (ကိုယ့်မိဘရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကိုတောင် ကြည့်ခွင့် မရခဲ့တဲ့အဖြစ်) →